Moments Neshamwari 39
Munhu angazvidzivirira sei kune nhema kana kunyomba vamwe?
Nekuvimbika mukufunga, kutaura chokwadi pakutaura, uye nekuita chete. Kana murume asingazofungi nhema uye achireva chokwadi pakutaura, nhema kana kuchera hazvigoni kumukunda. Tichifunga nezve zvinoita sekusarongeka uye kuchera zvisina kukodzera munyika, kutaura uku hakuzoite sekunge kuri kutaurwa nezvakaitika. Asi, ichokwadi. Hapana munhu anoda kusekwa; hapana munhu anoda kupomedzerwa nhema; asi ruzhinji rwevanhu runoreva nhema nekureva nhema vamwe. Pamwe nhema dzinongova diki, “chena chenhema”; pamwe kuchera kunoitwa chete munzira yeku makuhwa, kuita hurukuro. Zvakadaro, kunyepa inhema, zvisinei inogona kuve yakavezwa kana kunzi. Chokwadi ndechekuti, zvakawoma kuwana chero munhu anofunga akatendeseka, akataura chokwadi uye oita zvakatwasuka. Mumwe anogona kubvuma chirevo ichi kuti chinowanzoitika kune vamwe, asi iye anogona kuchiramba kana chakaiswa kwaari. Kuramba kwake, zvisinei, kunoratidzira kutaura kwacho kuri kwechokwadi kwaari, uye ndiye mubatiri wake. Tsika yepasirese yekuchema vachipesana nekunyepa uye kushora kuchera kazhinji, asi kusapfuudza mipiro yedu mukugovera, zvinokonzeresa uye kuchichengetedza yakakura zvakadaro nhumbi uye yezvinhu zvakatenderedza kutenderera, uye zvinokonzeresa avo vane chekuita nekugovera kune iva anokurirwa zvakanyanya kana kukuvadzwa nenhema uye kuchera.
Nhema dziri munyika yehunhu iko kuuraya kuri muiri munhu wenyama. Iye anoedza kuponda anouraya muviri wenyama. Iye anonyepa nezve mumwe anokuvadza kana kuedza kuparadza hunhu hweuyo. Kana uyo anenge achinzi mhondi asawana mukana wekupinza chombo chake mumuviri waakabirwa, haabudirire pakuedza kwake kuponda, uye zvingangoitika kuti kana abatwa anozotambura chirango checho chiito. Kuti adzivise kupinda mukati memuviri we chombo chemhondi, anenge arwadziswa anofanira kunge akazvidzivirira nejasi rezvombo kana chimwe chinhu chinoramba kurwiswa. Mhondi munyika yetsika inoshandisa kunyepa, kunyepa, kuchera, sezvombo zvake. Neizvi anorwisa hunhu hwemunhu waanenge ada. Kuti azvidzivirire pazvombo zvemhondi, munhu anenge arohwa anofanira kunge aine nhumbi dzokurwa nadzo. Kutendeseka mukufunga, kutaura chokwadi mukutaura, uye kururamisa mukuita, kuchavaka pamusoro pake murwi anogona kukurwisa. Iyi nhumbi yezvombo haionekwe, asi kunyangwe kana kunyepa kana kuchera kwakaonekwa, kana hunhu hahuonekwi. Kunyangwe zvisingaonekwi, izvi zvinhu zvakanyanya kukunda pfuti, banga, kana chombo chesimbi. Nhema kana kuchera hazvigoni kukanganisa chimiro cheuyo anochengetedzwa nekutendeseka uye chokwadi, nekuti kutaura chokwadi nekuvimbika isimba risingaperi; Nhema nekuchera ndivo vanopikisana navo, uye zvinhu zvakaipa, zvisina basa. Nhema hadzigoni kukunda chokwadi. Kutuka hakugone kukunda kutendeseka. Asi kana panzvimbo pekuvimbika mune wake pfungwa murume anofunga nhema uye akataura manyepo, mafungiro ake nemataure zvinoita kuti hunhu hwake huve hwakasununguka uye hwusina kunyepa kubva pakunyepa kwakanaka kana kuchera kwakanangana naye. Kana, zvakadaro, chimiro chake chakadzivirirwa nhumbi yakagadzirirwa kutendeka kwake mukufunga uye chokwadi mukutaura, ipapo zvombo zvakagadzirirwa iye zvinozodzikama pane iye akavakanda uye iye amene achatambura mhedzisiro yechiitiko chake. Ndiwo mutemo uri mutsika. Iye unokuvadza mumwe, nekureva nhema, nekuchera, ipapo uchatambudzika nenhema dzevamwe, asi chirango chinogona kudzoserwa. Zviri nani kuti munhu auraye mumwe kune imwe nguva kuti atore paari uye kubva pfuti yokuvimbika uye chokwadi chemunhu waakabirwa, nekuti anogona kuona uye achakurumidza kuona kusavimbika kwekufunga kwakaipa uye chiito, uye achaita anokurumidza kudzidza kurega kureva nhema, kuti arege kuita zvisakarurama nekuti haagoni kuita zvisakarurama pasina kukuvara kwaari. Mushure mekunge adzidza kuti haafanire kuita zvakaipa kana akadzivisa chirango chekukanganisa, achakurumidza kudzidza kuita zvakanaka nekuti ndizvo zvakanaka nezvakanaka.
"Nhema chena" nhema uye kuchera zvisina basa hazvisi zvinhu zvidiki zvisina njodzi izvo zvavanoratidzika kuva maziso ekusaona. Iwo ndiyo mhodzi dzekuuraya uye dzimwe mhosva, asi nguva yakawanda inogona kupindira pakati pekudyarwa kwemhodzi uye kukohwewa kwemichero.
Kana mumwe akataura nhema dzisingawanikwe, iye anofanira kuudza mumwe, uye imwe, kusvikira iye azviona. uye anova murevi wakaomeswa, akasimbiswa mutsika. Kana mumwe akareva nhema, anogara achireva nhema imwe kuviga yake yekutanga, uye yechitatu kuviga vaviri, uye zvichingodaro kusvikira manyepo ake achipesana uye zvikaita seuchapupu hwakasimba hunopesana naye. Akanyanyobudirira iye pakutanga mukuwedzera pakuwanda kwenhema dzake, iye achanyanyisa kupunzika uye kupwanyika kana vana vepfungwa dzake vakashevedzwa kuti vapupure pamusoro pake. Mumwe anozvidzivirira nokutendeka, kutaura chokwadi, kururamisira, mumafungiro ake uye kutaura uye kuita, haangangozvidzivirira kubva pakurwiswa kwenhema uye kuchera; Iye achadzidzisa nzira yekurega kumurwisa avo vangamurwisa uye nekuzvidzivirira kwavo nekuwana neasingaoneki nhumbi dzezvombo. Iye achava chaiye philanthropist nekuda kwesimba retsika iro vamwe vakakurudzirwa kuti vakudziridze. Iye achava chaiye anochinja, nekugadzwa kwekuvimbika, kutaura chokwadi uye kururamisira mufungwa uye kutaura. Nekudaro nemhosva ichipera, dzimba dzekururamisa dzinenge dzabviswa uye majeri akabviswa, uye nepfungwa dzinoshanda, munhu achave nemufaro uye anozoziva kuti rusununguko chii.